Qaramada midoobay oo loogu baaqay in ay diiwaan galiso qaxooti... | Universal Somali TV
Qaramada midoobay oo loogu baaqay in ay diiwaan galiso qaxooti soomaaliyeed oo dib ugu laabtay Dadab
Xildhibaanka hoose ee ismaamulka Garissa ee gobolka waqooyi bari kenya u matala magaalada Dadab mr maxamed aboo ayaa ugu baaqay laanta qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR in ay diiwaan galiso qaxooti cusub oo soo gaaray Dadab.
Mr Aboo oo la hadlay Universal ayaa waxaa uu tilmaamay in dhibaato ba,an ay heysato qaxootiga cusub ee dib ugu soo laabtay xeryaha,kuwaasi oo markii hore qaarkood ku laabtay heshiiskii is afgarashada sadex geesoodka ahaa oo ay galeen soomaaliya kenya iyo qaramada midoobay.
Mudanaha magaalada Dadab ayaa sheegay in qaramada midoobay uu xil ka saaran yahay dadka u baahan gargaarka in la caawiyo maadama aysan Jirin cid kale oo u maqan.
Isaga sii hadlay ayaa waxaa uu sheegay in dadkaan ay dalkooda ugu laabteen balan qaad ahaa in laga caawin doono adeegyada aasaasiga sida biyaha waxbarashada caafimaadka,iyo raashin ku filan balse aysan suura galin in ay helaan.
Hadalkan ka soo yeeray xildhibaanka hoose ee ismaamulka Garissa u matala magaalada Dadab ayaa waxaa uu ku soo aadayaa iyadoo dad horay dib ugu laabtay gudaha dalka ay bilaabeen in ay u soo laabtaan xeryaha Dadab.
Kan-xigaHindiya oo mamnuucday boqolaal shirka...
Kan-horeSawiro:Police-ka California oo baaray...
46,652,116 unique visits